5 akanakisa mabhuku naMatilde Asensi
Munyori ari kutengesa zvakanyanya par kugona muSpain ndiMatilde Asensi. Manzwi matsva uye ane simba seayo e Dolores Redondo Vari kusvika iyi nzvimbo inokudzwa yemunyori weAlicante, asi vachiri nerwendo rurefu rwekuenda kuti vasvike. Mubasa rake refu, kutengeserana kwake uye nhamba yevaverengi ...
3 akanakisa Robert Graves mabhuku
Nekuda kwekuverenga bhuku rinonzi The Sixteen Trees of the Somme, rakanyorwa naLarss Mytting, ndakamutsa kutora chikamu kwaRobert Graves mukuru muhondo yakaitika mudunhu reFrance reSomme, pakafa varwi vanopfuura miriyoni uye Ndezvipi…
Mabhuku matatu akanakisa aJavier Negrete
Kunyora neruzivo rwezvazviri pamusoro pezvinhu zvinogara zvichikonzera kuyemurwa pakati pevaverengi, senge nhoroondo yenhema, zvinotopa chiremera uye solvency pane nyaya yerondedzero. Uye ndezvekuti Javier Negrete, akapedza kudzidza muClassical Philology, anotora mukana wake ...
3 akanakisa mabhuku naBernard Cornwell
Nherera yevabereki vaviri kubva pazera diki kwazvo, Bernard Cornwell anogona kunzi ndiye prototype yemunyori anozvigadzirira. Kunyangwe chiri chinhu chinoshanda kupfuura kufunga kwerudo. Chokwadi ndechekuti akazove munyori kunze kwekukosha kana achinge atamira kuUnited States, achiisa ramangwana rake ...
3 akanakisa mabhuku eHilary Mantel
Mushure mekumwe kwekuzeza kunyorwa kwekutanga pakati pemhando dzakasiyana sedzakasiyana ngano uye yazvino yerudo genre (iyo yerudzi rwepink nhoroondo), Hilary Mantel atove munyori akabatanidzwa wenhoroondo. Pasi pemuraira werudzi urwu rwakakwanisa kuhwina mibairo miviri pazviitiko zviviri ...
Iwo matatu akanakisa mabhuku eSantiago Posteguillo
Pamwe munyori wepakutanga wechiSpanish wenhau dzakaitika ndiSantiago Posteguillo. Mumabhuku ake tinowana yakachena nhoroondo asi isu tinogona zvakare kunakidzwa nechisungo chinopfuura nhoroondo dzezvakaitika kuti uongorore munhoroondo yekufunga kana hunyanzvi kana zvinyorwa. The mavambo…
3 akanakisa mabhuku naJosé Luis Corral
Kana munyori wenhoroondo akafunga kunyora nhoroondo yenhoroondo, nharo dzinopfura kusvika pakuenda. Iyi ndiyo nyaya yaJosé Luis Corral, munyori weAragonese uyo anozvitsaurira zvakanyanya kune mhando yenhoroondo yekunyepedzera, achichichinjisa nemabhuku ehunhu hunodzidzisa semudzidzi akanaka munharaunda yake. Zvakatipoteredza…
3 akanakisa mabhuku naUmberto Eco
Anongoramba ari semologist anogona kunyora maviri enganonyorwa senge Foucault's Pendulum kana Iyo Chitsuwa cheZuva Rakatangira uye usaparara mukuyedza. Umberto Eco aiziva zvakanyanya nezve kutaurirana uye zviratidzo munhoroondo yevanhu, zvekuti akazopedzisira odurura huchenjeri kwese kwese mune izvi zviviri ...
Peji1 Peji2 ... Peji14 Zvadaro →